गिल किन ओपनिङ गर्न आएनन ? बीसीसीआईले दियो यस्तो अपडेट - Man Xune Kura
काठमाडौंः मुम्बईमा जारी भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको टेस्ट म्याचमा भारतको दोस्रो इनिङ्समा मयंक अग्रवालसँगै नियमित ओपनर शुभमन गिल इनिङ्स ओपन गर्न आएनन्। गिलको स्थानमा चेतेश्वर पुजाराले ओपनिङ गर्ने मौका पाए।
न्युजिल्याण्डको इनिङ्समा फिल्डिङ गर्ने क्रममा गिल घाइते भएका थिए। सोही कारण उनले मैदान छाड्नुपरेको थियो। पछि उनी ब्याटिङ गर्न पनि आएनन्। बीसीसीआईले गिलले ब्याटिङ नगर्नुको कारणबारे एउटा महत्वपूर्ण अपडेट दिएको छ।
बीसीसीआईले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टमा पहिलो इनिङ्समा फिल्डिङ गर्ने क्रममा गिलको कुहिनोमा चोट लागेको जानकारी दिएको छ।
बीसीसीआईले ट्वीटमा लेखेको छ, ‘पहिलो इनिङ्समा फिल्डिङ गर्ने क्रममा शुभमन गिलको दाहिने कुहिनोमा चोट लागेको थियो। उनी पूर्ण रूपमा निको भएका छैनन्। त्यसैले सावधानीका रूपमा फिल्डिङ गरेका छैनन्’
गिलको चोट कति गम्भिर छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। यो शृङ्खलापछि भारतले दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा जाने भएकाले उनको चोट गम्भीर नहोस् भन्ने सबैको आशा छ।
मुम्बई टेस्टमा दुई दिनको खेल सकिँदा भारत बलियो स्थितिमा पुगेको छ। उसको कुल अग्रता ३३२ रनको छ भने सबै विकेट बाँकी छ। यसअघि भारतको पहिलो इनिङ ३२५ रनमा समेटिएको थियो भने किवी बलर एजाज पटेलले सबै विकेट लिएर इतिहास रचेका थिए।
तर, किवी टोलीका ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन निकै खराब रह्यो। पूरा टिम ६२ रनमा अलआउट भयो भारतले दोस्रो इनिङ्समा दिनको खेल सकिँदा विना क्षति ६९ रन बनाएको छ। । क्रिजमा मयंक अग्रवाल ३८ र पुजारा २९ रनमा छन्।
The post गिल किन ओपनिङ गर्न आएनन ? बीसीसीआईले दियो यस्तो अपडेट appeared first on .
Previous: सुहागरातकै दिन बेहुलाको गोप्य कुरा थाहा पाएपछि बेहुलीले गरिन् हंगामा (भिडियो सहित)
Next: भक्तपुरका चार नगरमा माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व